यो कोटिले तथ्याङ्क/सुचनाप्रकार्यहरू(functions) समावेश गराउँदछ ।
घुसाउनुहोस् - प्रकार्य - बिवरणिका सूचना
तालिकामा दिएको डेटाले आधार स्वरूप ह्रास कट्टी प्रकार्यमा केही उदाहरणहरूका लागि मद्दत गर्दछ ।
ले ठेगाना, ढाँचा वा कक्षको सामग्रीहरूमा सूचनाहरू फर्काउँदछ ।
Info_type क्यारेक्टर स्ट्रिङ हो जसमा सूचनाहरूको प्रकार निर्दिष्ट गरिन्छ । क्यारेक्टर स्ट्रिङ प्राय जसो अङ्ग्रेजीमा हुन्छ । ठुला अक्षर र साना अक्षर वैकल्पिक हुन्छ ।
सान्दर्भित स्तम्भको सङ्ख्या फर्काउँदछ ।
=CELL("COL";D2) ले4फर्काउँछ।
सान्दर्भित पङ्क्तिको सङ्ख्या फर्काउँदछ ।
=CELL("ROW";D2) ले2फर्काउँदछ ।
सान्दर्भित पानाको सङ्ख्या फर्काउँदछ ।
=CELL("Sheet";Sheet3.D2) ले3फर्काउँदछ ।
सान्दर्भित कक्षको निश्चित ठेगाना फर्काउँदछ ।
=CELL("ADDRESS";D2) ले $D$2 फर्काउँदछ ।
=CELL("ADDRESS";Sheet3.D2) ले $Sheet3.$D$2 फर्काउँदछ ।
सान्दर्भित कक्षको फाइल नाम र पाना सङ्ख्या फर्काउँदछ ।
=CELL("COORD"; D2) ले $A:$D$2 फर्काउँदछ ।
=CELL("COORD"; Sheet3.D2) ले $C:$D$2 फर्काउँदछ ।
सान्दर्भित कक्षको सामग्रीहरू फर्काउँदछ बिना कुनै ढाँचा ।
कक्ष सामग्रीहरूको प्रकार फर्काउँदछ ।
b = blank. खाली कक्ष
l = label. पाठ, पाठको रूपमा सूत्रको परिणाम
v = value. मान,सङ्ख्याको रूपमा सूत्रको परिणाम
सान्दर्भित स्तम्भको चौडाइ फर्काउँदछ । एकाइ शून्यहरू (०)जको सङ्ख्या हुन्छ जसमा पूर्व निर्धारित कक्ष र पूर्व निर्धारित साइजमा स्तम्भ भित्र ठीक गर्दछ ।
सान्दर्भित कक्षको पङ्क्तिबद्धता फर्काउँदछ ।
' = बायाँ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस् वा बायाँ-समरेखित
" = दायाँ पङ्क्तिबद्ध गर्नुहोस्
^ = केन्द्रिकृत
\_ = दोहोरिँदा (हालसालै निस्क्रिय)
कक्षका लागि कक्ष सुरक्षा वस्तु स्थिति फर्काउँदछ ।
१ = कक्ष सुरक्षित हुन्छ
० = कक्ष सुरक्षित हुँदैन
क्यारेक्टर स्ट्रिङ फर्काउँदछ जसले सङ्ख्या ढाँचाँ बुझाउँदछ ।
, = हजारौ विभाजकसहित सङ्ख्या
F = हजारौ विभाजक बाहेकको सङ्ख्या
C = मुद्रा ढाँचा
S = एक्सपोनेन्सल पुन: प्रस्तुतीकरण,उदाहरणका लागि, 1.234+E56
P = प्रतिशत
उपरोक्त ढाँचाहरूमा, दशमलब विभाजक पछि दशमलब स्थानहरूको सङ्ख्या सङ्ख्याको रुपमा दिएको छ । उदाहरण: सङ्ख्या ढाँचा #,##0.0 ले १ र सङ्ख्या ढाँचा 00.000% ले P3 फर्काउँछ ।
D1 = MMM-D-YY, MM-D-YY र दुरुस्त ढाँचाहरू
G = सबै अरू ढाँचाहरू
अन्त्यमा - (घटाउ) = ऋणात्मक सङ्ख्याहरू रङिनमा ढाँचा भएका हुन्छन् ।
अन्त्यमा () (कोष्ठकहरू) = त्यो ढाँचा सङ्केतमा खुला कोष्ठक हो ।
यदि ऋणात्मक मानहरू रङमा ढाँचा भइसकेका छन् भने १ फर्काउँदछ अन्यथा ० फर्काउँदछ ।
यदि ढाँचा सङ्केतले खुला कोष्ठक( समावेश गरेको खण्डमा १ फर्काउँदछ, अन्यथा ० फर्काउँदछ ।
सन्दर्भ (विकल्पको सूची) परीक्षण गर्नुपर्ने कक्षहरूको अवस्था हो । यदि सन्दर्भदायरा भएको खण्डमा, कक्ष दायराको बायाँ माथि सर्छन् । यदि सन्दर्भहराइ रहेको खण्डमा LibreOffice क्याल्क कक्षको स्थितिमा प्रयोग गरिन्छ जुनचाहिँमा यो सूत्र स्थानिकृत भएको हुन्छ । माइक्रोसफ्ट एक्सेल कक्षको सन्दर्भ प्रयोग गर्दछ जसमा कर्सर अवस्थित भएको हुन्छ ।
यो प्रकार्यले परिणामको कुन सूत्रको मूल्याङ्कन गर्ने मितिलाई फिर्ता गर्दछ (अर्को शब्दमा, नतिजाको नतिजा जसको परिणाम जुन भएको छ)। यसको मुख्य प्रयोग कक्ष सामग्रीहरूमा आधारित कक्षमा चयनित शैलीहरू लागू गर्न STYLE() प्रकार्य संग एक साथ हुन्छ।
फर्मुला सेलको फर्मुलालाई टेकस्ट स्ट्रिंगमा प्रदर्सन गर्दछ।
यदि सेल A8ले सूत्र=SUM(1;2;3) समावेश गर्दछ भने
=FORMULA(A8) =SUM(1;2;3) पाठ फिर्तागर्द्छ।
यदि कक्षमा सन्दर्भहरू खाली भएको खण्डमा ले TRUE फर्काउँदछ । कक्षको सामग्री खाली भएको खण्डमा यो प्रकार्य निर्धारण गर्न प्रयोग गरिन्छ । कक्ष भित्रको सूत्र खाली हुँदैन ।
मानसामग्री परीक्षण गर्नलाई हो ।
ISBLANK(D2) ले परिणामको रूपमा FALSE फर्काउँदछ ।
कुनै पनि त्रुटि मानले स्वीकार गर्ने#N/Aमा सान्दर्भित गरेको खण्डमा TRUE फर्काउँदछ । तपाईं यो प्रकार्य प्रयोग गरेर निश्चित कक्षहरूमा त्रुटिमानहरू नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ ।
मान कुनै पनि मान वा अभिव्यक्ति हो जहाँ कुनैमान निर्धारण गर्नलाई प्रस्तुत गरिन्छ या त्रुटि मान #N/A प्रतिशतसँग बराबर हुँदैन ।
ISERR(C5)जहाँ सेल C8ले =1/0समावेश गर्दछ त्यस्ले TRUE फर्काऊदछ, किनकि १/० एक त्रुटी हो।
ISERR(C9)जहाँ सेल C9ले =NA()समावेश गर्दछ त्यस्ले FALSE फर्काऊदछ, किनकि ISERR() ले #N/A त्रुटी उपेक्षा गर्दछ ।
यदि साधारण त्रुटि मानहरू कक्षहरूले समावेश गरेको खण्डमा ISERROR ले परीक्षण गर्दछ । ISERROR ले #N/A त्रुट्टि मान सङठित गर्दछ ।
मान परीक्षण गरिनु पर्ने मान हो वा मानलाई जनाउँदछ। त्रुटी फेला परेमा ISERROR() ले TRUE दिन्छ भने अन्यथा FALSE दिन्छ।
ISERROR(C8)जहाँ सेल C8ले =1/0समावेश गर्दछ त्यस्ले TRUE फर्काऊदछ, किनकि 1/0 एक त्रुटी हो।
ISERROR(C9)जहाँ सेल C9ले =NA()समावेश गर्दछ त्यस्ले TRUE फर्काउँदछ।
IFERROR(C8;C9)जहाँ सेल C8ले =1/0समावेश गर्दछ त्यस्ले C9को मूल्य फर्काउँदछ किनकि 1/0 एक त्रुटी हो।
IFERROR(C8;C9)जहाँ सेल C8ले १३समावेश गर्दछ त्यस्ले C8 को मूल्य १३ फर्काउँदछ जुन एक त्रुटी होइन।
मान जोर इन्टिजर भएको खण्डमा TRUE फर्काउँदछ । यदि मान बिजोर भएको खण्डमा FALSE पर्काउँदछ ।
मान जाँच गरिनुपर्ने मान हो ।
=ISEVEN(48)ले TRUE फर्काउदछ
=ISEVEN(33)ले FALSE फर्काउछ
=ISEVEN(0) ले TRUE फर्काउदछ
=ISEVEN(-2.1)ले TRUE फर्काउदछ
=ISEVEN(३.९९९)ले FALSE फर्काउदछ
जोर सङ्ख्याहरूका लागि परीक्षण गर्दछ । यदि २ ले भाग गर्दा पूर्णसङ्ख्या फर्काएको खण्डमा TRUE (1) फर्कन्छ ।
संख्या परीक्षण गरिनुपर्ने संख्या हो ।
=ISEVEN_ADD(५)ले ० फर्काउदछ।
यदि कोठा मा २ छ भने =ISEVEN_ADD(A1) ले १ फर्काउँदछ।
यदि कक्ष सूत्र कक्ष भएको खण्डमा ले TRUE फर्काउँदछ ।
ISFORMULA(C4)ले FALSE फर्काउँदछ यदि सेल C4 ले ५ समावेश गर्दछ।
कक्षले युक्ति संगत सङ्ख्या ढाँचा समावेश गराएको खण्डमा ले TRUE फर्काउँदछ । यो प्रकार्य निश्चित कक्षहरूमा TRUE र FALSE मानहरू दुवैका लागि जाँच गरेअनुसार प्रयोग गरिन्छ ।
मानयुक्ति संगत सङ्ख्या ढाँचाका लागि परीक्षण गर्ने मान हो ।
=ISLOGICAL(99)ले FALSE फर्काउँदछ किनकि ९९ अंक हो, तार्किक(logical) मान होइनl
कक्षले #N/A (मान उपलब्ध छैन) त्रुटि मान समावेश गराएको खण्डमा ले TRUEफर्काउँदछ ।
मान यो परीक्षण गर्नलाई मान वा अभिव्यक्ति हो ।
=ISNA(D3) ले FALSE नतिजा फर्काउदछ।
यदि कक्ष सामग्रीहरू पाट वा सङ्ख्याहरू भएको खण्डमा परीक्षण गर्दछ र सामग्रीहरू पाठ भएको खण्डमा FALSE फर्काउँदछ ।
मान कुनै मान वा अभिव्यक्ति हो जहाँ परीक्षण निर्धारण गर्न सम्पादन गरिन्छ या यो पाठ वा सङ्ख्याहरू वा बूलीयन मान हो ।
यदि D2 कोठामा टेक्स्ट abcdef छ भने=ISNONTEXT(D2) ले FALSE फर्काउँदछ।
यदि D9 कोठामा अंक ८ छ भने=ISNONTEXT(D9) ले TRUE फर्काउँदछ ।
मानले सङ्ख्यामा सान्दर्भित गरेको खण्डमा ले TRUE फर्काउँदछ ।
मान कुनै निर्धारण गर्नलाई परीक्षण गर्ने अभिव्यक्ति हो या यो सङ्ख्या वा पाठ हो ।
येदी C3 कोठामा अंक ४ छ भने =ISNUMBER(C3) ले TRUE फर्काउँदछ ।
यदि C2 कोठामा टेक्स्ट abcdef छ भने=ISNUMBER(C2) ले FALSE फर्काउँदछ ।
यदि मान बिजोरमा छ भने TRUE फर्काउँदछ वा जोर सङ्ख्यामा भएको खण्डमा FALSE फर्काउँदछ ।
=ISODD(33)ले TRUE फर्काउदछ
=ISODD(४८)ले FALSE फर्काउदछ
=ISODD(३.९९९)ले TRUE फर्काउदछ
=ISODD(-३.१)ले TRUE फर्काउदछ
यदि २ ले भाग गर्दा सङ्ख्याले पूर्णसङ्ख्या नफर्काएको खण्डमाले TRUE (1) फर्काउँदछ ।.
=ISODD_ADD(५) ले १ फर्काउँदछ ।
यदि एउटा वा पृथक कक्षहरूको सामग्री सन्दर्भ भएको खण्डमा परीक्षण गर्दछ । कक्ष वा कक्षहरूको दायरामा सन्दर्भहरूको प्रकार प्रमाणित गर्दछ ।
मान निर्धारण गर्नलाई परीक्षण गर्ने मान हो या यो सन्दर्भ हो ।
ISREF(C5)ले परिणाम TRUE फर्काउँदछ किनकि C5 एक मान्य रिफ्रेन्स हो।
=ISREF(4)ले FALSE फर्काऊदछ।
यदि कक्ष सामग्रीहरूले पाठमा सान्दर्भित गर्दछ भने TRUE फर्काउँदछ.
मान मान हो, सङ्ख्या, बुलियन मान, वा परीक्षण गर्नलाई त्रुटि मान ।
यदि D9 कोठा मा टेक्स्ट abcdef छ भने=ISTEXT(D9)ले TRUE फर्काउँदछ ।
येदी C3 कोठामा अंक ३ छ भने =ISTEXT(C3) ले FALSE फर्काउँदछ ।
N(१२३) ले 123 फर्काउँदछ
N(TRUE())ले १ फर्काउँदछ
N(FALSE())ले ० फर्काउँदछ
=N("abc")ले ० फर्काउँदछ
ले त्रुटि मान #N/A फर्काउँदछ ।
NA() ले सेलको सामग्रीहरू #N/A मा रूपान्तरण गर्दछ।
उदाहरण (माथिको उदाहरण तालिका हेर्नुहोस्)
=TYPE(C2)ले परिणामको रूपमा २ फर्काउँदछ।
=TYPE(D9)ले परिणामको रूपमा 1 फर्काउँदछ ।
Title is: सूचना प्रकार्य